Vincent's Tech Den | sumi.news
Aung Kyaw Paing's Tech Blog
Vincent's Tech Den: www.aungkyawpaing.dev/rss
Android Dev 🤖, Music Nerd 🎵
Aung Kyaw Paing's Tech Blog · aungkyawpaing.dev · 3mo
Common anti-patterns of using RecyclerView that I've seen over the years and how to avoid them.
Aung Kyaw Paing's Tech Blog · aungkyawpaing.dev · 4mo
2020 Reflection in Romance
I did an analysis on me and my SO's text exchange throughout 2020 asaway to remember the good things in 2020
Aung Kyaw Paing's Tech Blog · aungkyawpaing.dev · 6mo
On Healthy Developer Habits
ကျွန်တော်တို့ ကုဒ်တွေရေးကြတဲ့အခါမှာ အချိန်မှီမပြီးတော့မှာမလို့ စိတ်ညစ်ဘူးကြတယ်၊ ကိုယ်က အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရေးချင်ပေမဲ့ အချိန်မရ(သို့)အခွင့်မသာလို့သာ လျှော်လိုက်ရတယ်၊ ဒီလို လျှော်လိုက်ရတာကိုလည်း မကျေနပ်ဘူး။ ကြာတော့ ကုဒ်ရေးရတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိသလို ခံစားရလာတယ်...
Aung Kyaw Paing's Tech Blog · aungkyawpaing.dev · 7mo
Photo by noor Younis on Unsplash ကျွန်တော်ဒီ Blog Post Series လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် တိကျမှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေပေ
Photo by Arkar Phyo on Unsplash ကျွန်တော်ဒီ Blog Post Series လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် တိကျမှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေပေးနိုင်ဖို့ ဖန်
Photo by Lwin Kyaw Myat on Unsplash ကျွန်တော်ဒီ Blog Post Series လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် တိကျမှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေပေ
Aung Kyaw Paing's Tech Blog · aungkyawpaing.dev · 10mo
Ethical Analytics 🔬
Photo by Lianhao Qu on Unsplash တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာသာတစ်ခုကို သီးသန့်သင်ခဲ့ရတယ်။ အဲတုန်းကတော့ ငယ်သေးတော့ ဒါတွေက အရေးကြီးမှန်း နားမလည်ခဲ့ဘူး။ အခု
Experience with UIAutomator 🚧
Photo by ray rui on Unsplash Since the pandemic starts, my work has shifted to remote working, and this changesalot of things for me. But you’re not here to read about me talking about good and bad of remote work. So, I’m just gonna go
Aung Kyaw Paing's Tech Blog · aungkyawpaing.dev · 1yr
Photo by Gabriel Wasylko on Unsplash I always wanted to look into how to make an open source Android project while hiding all the secrets from the source. And with the Burma election approaching and mVoter 2020 in development(Disclaimer : We’re unsure if the app will be released
Dependency Injection ဘာလို့လုပ်?
Depdendency Injection အကြောင်းဖတ်ရရင် များသောအားဖြင့် ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်တာလောက်ပဲပြောပြကြတာတွေ့ရတယ်။ ဘာလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သေချာမြင်အောင် ပြောပြဖို့လိုတယ်ထင်တယ်။ ဆိုတေ
ပထမဆုံး iOS App အတွေ့အကြုံ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၊၄ လလောက်က iOS Development စလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး Angela Yu ရဲ့ iOS course လေးဝယ်ပြီး စလေ့လာဖြစ်တယ်။ စလုပ်ပြီးနောက် ၂လလောက်ကြာတော့ ရုံးမှာ iOS App လေးတစ်ခု ဝင်တာနဲ့ ကိုယ်
Testing COIL with Espresso Image are not owned by me COIL is the biggest new thing in Android community in recently. For those of you doesn’t know, COIL is an image loading library for Android, made with Kotlin coroutines. So I was intrigued by the fact that you
SQL က Relational စစ်သလား?
တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက SQL က “Relational Database” အစစ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ စာလေးသွားဖတ်မိတယ်။ နောက်တော့ အဲဒီစာပိုဒ်လေးကိုပဲ presentation လုပ်ဖို့ အလှည့်ကျတယ်။ သင်ရိုးစာအုပ်မှာက
Aung Kyaw Paing's Tech Blog · aungkyawpaing.dev · 2yr
မြင်းတစ်ကောင်က သင်ပေးတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်လောက်က ကော်ဖီဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ Bojack Horseman ဆိုတဲ့ ကားလေးကို ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ စစကတော့ ပုံမှန် တစ်
TFLite နဲ့ Not Hotdog App ရေးကြမယ်
Credit : Annie Spratt Droidcon Ph 2018 မှာ codelabs အဖြစ်နဲ့ပြောခဲ့ပေမဲ့ ပွဲမှာလူလာနည်းတာကတစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းသားတွေများလို့ အခြေခံတွေပါပြန်ရှင်းပြရတော့ မှန်းထားတဲ့အချိန်ထက်ပိ